मुख्य Archives - Page 119 of 135
काठमाडाै । २०७३ सालदेखि काठमाडाैमा मात्र अनलाइनबाट लार्इसेन्सकाे फर्म र्भन सकिने व्यवस्था अाइतबारदेखि देशभरमा सञ्चालनमा अाउने भएकाे छ । यातायात व्यवस्था विभागले अब लाइन लागेर सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बाध्यतालार्इ हटाउदै …
काठमाडाै । पर्साकाे विरगञ्ज नगरपालिकामा जाडाेले चिसोले कठ्यांग्रिएर एकै परिवारका २ जनाको मृत्यु भएकाे छ । बिहानै भवानीपुर नजिकै गण्डक नहरमा आगो ताप्ने क्रममा चिसोले ढलेर मञ्जुकाे मृत्यु भएको र बिहान खाना …
पार्टी एकता र सरकार गठनको चटारोकैबिचमा ओली किन जान लागे बैंकक ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकता र सरकार गठनको चटारोकैबिच भोलि थाइल्याण्डका लागि उड्ने भएका छन्। उन आफ्नो नियमति स्वस्थ्य चेकजाँचको थाईल्याण लागि जान लागेको ओलीको स्वकीय सचिवालयले …
शेयर बजार परिसुचक नेप्से १३ अंकले बृदि
काठमाडाै । गत साता अाेरालाे लागेकाे नेप्से याे साताकाे मंगलबार भने १३ अंकले बृदि भएकाे छ । उत्पादनबाहेक सवै समूहको परिसुचक बढेको नेप्से १३ अंकले बढेर १४ सय ५६ विन्दुभन्दा …
राष्ट्रियसभाका लागि १० दल दर्ता: हेर्नुस् कुन कुन दल भए दर्ता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म १० वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गरेका छन् । माघ २४ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म १० वटा राजनीतिक दलले मात्र …
शीतकालीन ओलम्पिक खेलमा सहभागी हुदै उत्तर कोरिया
काठमाडाै , २५ पुस (रासस÷सिन्ह्वा) ः उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा आयोजित शीतकालीन ओलम्पिक खेलमा आफ्नो सहभगिता रहने बताएको छ । दुई कोरियाबीच मङ्गलबार दक्षिण कोरियामा भएको वार्तापछि उत्तर कोरियाले सो …
डा. केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिए के हुन्छ उनलाई सजाय? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलना मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग आज बयान लिएको छ । अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गरी आज बिहान अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी …
कडा सुरक्षा घेरामा सर्वाेच्च अदालत (फोटो फिचर)
काठमाडाै । डा.गाेविन्द केसीलार्इ सर्वाेच्चले पक्राउ गरेर बयान लिन सुरू गरेपछि सर्वाेच्च अदालतकाे शुरक्षाकाे घेरा कडा पारीएकाे छ । उनलार्इ पक्राउ गरेकाे अाक्राेशमा बिहानदेखि माइतीघरमा प्रर्दशन भएपछि अदालतकाे शुरक्षा झन …
सर्वाेच्चमा डा.केसीको बयान,भ्रष्ट प्रवृत्तिविरुद्ध मेराे लडाइँ हाे, म त्यसमा अडिक छु।’
काठमाडाै । साेमबार पक्राउ परेका अनशनरत डा. गाेविन्द केसीकाे सर्वाेच्चमा बयान सुरू भएकाे छ । बिहान साढे ८ बजे नै केसीलाई सर्वाेच्चमा लगिएपनि ५ घन्टापछि बहस सुरु भएको थियो । …
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा गोविन्द केसीलाई प्रक्राउ गरिएको विरोधमा आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रा डा केसी …